Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Chelsea Oo Wada Xiiseenaya Samuel Chukwueze
HomeHoryaalka IngiriiskaManchester United, Liverpool, Real Madrid, Chelsea oo wada xiiseenaya Samuel Chukwueze
November 25, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha 0
ManchesterUnited , Liverpool iyo Chelsea ayaa ka mid ah kooxaha xiiseynaya saxiixa garabka kooxda Villarreal Samuel Chukwueze , sida lagu sheegay warbixin.
21 jirkaan ayaa si joogta ah uga mid noqday kooxda koowaad ee Villarreal xilli ciyaareedyadii la soo dhaafay, isagoo saftay 37 kulan oo La Liga ah xilli ciyaareedkii 2019-20.
Qaab ciyaareedka Chukwueze ee kulamadaas ayaa soo jiitay indhaha kooxo badan oo Yurub ah, iyadoo Real Madrid loo maleynayo inay hogaamineyso loolanka loogu jiro saxiixiisa.
La Razon ayaa sheeganeysa in Madrid ay isha ku heyso labo ciyaaryahan oo ay kula soo wareegto labada ciyaaryahan ee Villarreal Chukwueze iyo Pau Torres , waxaana ay diyaar u yihiin inay bixiyaan € 65m (£ 57.9m) iyo ciyaaryahanka bedelkiisa
Si kastaba ha noqotee, waxay wajihi karaan tartan gaar ah Chukwueze, iyadoo ilaa lix kooxood oo Premier League ah ay ka mid yihiin kuwa sidoo kale isha ku haya garabka.
Manchester United ayaa loo maleynayaa inay u aragto xiddiga heerka caalami ee dalka Nigeria bedelka Jadon Sancho , halka Chelsea, Liverpool, Wolverhampton Wanderers , Everton iyo Leicester City sidoo kale lala xiriiriyay inay xiiseynayaan.
Man United ayaa loo tixgeliyaa inay tahay kooxda ugu weyn ee kula tartameysa Madrid saxiixa, inkastoo Villarreal la rumeysan tahay inay heysato qandaraaskiisa oo dhan 80m (£ 71.3m) oo dhameystiran.
Chukwueze wuxuu dhaliyay 13 gool wuxuuna caawiyay 12 kale 90 kulan oo uu u saftay.